Tirakoob waxaa loo jeedaa xisaabinta iyo cabbiridda waxayaabo kala duwan. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa tirakoobka dad ku nool wadan, inta dhedig iyo lab ah, da'dooda, tirada carruurta, degaanada wadan sida dadka ugu kala fidsan yihiin iyo waxyaabo faro badan. Waxaa kaloo tirakoob loo isticmaalaa meelo farabadan sida shirkadaha wax soo saarka, ganacsiga, iyo codeynta doorashooyinka i.w.m.
Marka si fiican oo sax ah loo adeegsado tirokoobka waxaa la sameyn karaa isbarbar dhig waxyaabo kala duwan, iyadoo la ogaan karo waxyaabo badan oo nagu adkaan lahaa inaan xal u helno ama aan fahamno. Tirakoobka waxaa loo isticmaalaa gaaridda go'aannada khuseeya arrimo badan oo noqon kara kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar. Siyaasiyiinta, shirkadaha, aqoonyahannada cilmiga baara waxay hawlahooda ku saleeyaan nidaamka tirokoobka. Tirakoobku waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah xisaabta. Natiijooyinka ka soo baxa tirakoobka waxaa lagu soo bandhigaa tabeelooyin, jaantus iyo garaafyo.
Akhrinta iyo fahmidda tabeelooyinka iyo garaafyada waxay noqdeen qey muhiim ah oo ka mid ah nolol maalmeadkeenna. Meel walba ayaad ku arkeysaa tabeelooyin iyo garaafyo.
Inta badan warbixinada lagu soo bandhigo wargeysyada ama TV-ga waxaa lagu soo bandhigaa qaab shax ama garaaf ah oo fududeeyo inaan fahamno ujeeddada ay warbixintu xambaarsan tahay iyo macnaha aan kala soo bixi karno ee na quseeysa.
Marka aad safar aadeyso akhbaarta ku saabsan waqtiyada basaska, tareenada, duulimaadka, imaanshaha, iyo dib u dhaca i.w.m. waa kuwa qoran. Waxaan ka aqrisanaa sabuurad aad u weyn oo u qaab eg sidii shax xisaabeed.
Natiijada doorashada baarlamaanka Iswiidhan ee 2006
Marmar badan ayaa waxaa la isticmaala garaafyada si loogu sharaxo akhbaar iyo macluumaad muhiim ah. Tusaale ahaan waxaan u soo qaadan karnaa marka la soo saarayo natiijada doorashaooyinka.
Dhinaca midig waxaan ku aragnaa natiijada oo u qoran qaab tabeelo ah.
Waa natiijaddii isla doorashadii oo lagu soo bandhigay qaab garaafeed ah.